Saturday May 16, 2020 - 20:39:29 in Opinion
Dilaaga COVID 19 iyo Dabaaldegga Ciidda Hargeysa (Hargeysamedia) 28kii September 1918, magaalada Philadelphia ee ku taalla Maraykanka waxa ku soo fool lahaa dabaaldeg muhiim ah oo loo yaqaan Socdaalka Xorriyadda, kaas oo qaadhaan loogu ururinayey ciidamadii Maraykanka ee ka qaybgalayey dagaalkii 1aad ee dunida. Wakhtigaas waxa dunida faro ba’an ku hayey hargabka Isbaanishka oo galaaftay nolosha ku dhawaad 50 milyan oo qof. Sida ay taariikhyahannadu weriyeen, maamulkii Philadelphia iyo dadkii magaalada ku noolaa si kasta waa loogu caqli celiyey. Waxa laga baryay in ay dabaaldegga baajiyaan maadaama xanuunku ku fidayo isku imaatinka iyo isku milanka bulshada, waase la kari waayey. Baaq kasta oo loo diray dhagaha ayay ka furaysteen.